6lọ nkwari akụ 2022 kacha mma na Copenhagen na XNUMX | Akụkọ Njem
Copenhague bụ otu n'ime obodo kacha mara amara na Denmark. Ikuku nke ekuuru n'okporo ámá ya na ego nke atụmatụ ndị e nyere mee ka isi obodo Denmark bụrụ nhọrọ mara ezigbo mma iji nọrọ ụbọchị ole na ole na ezumike. Agbanyeghị, dịka ọ na-eme n'obodo ndị ọzọ nwere ebe ndị njem nlegharị anya dị elu, chọta ụlọ nkwari akụ dị ọnụ ala nke na-adịghị anya site na etiti o nwere ike buru nro. Ya mere, anyị na-enye gị ndepụta nke 6 kacha mma hotels na Copenhagen, gụnyere ụlọ dị ọnụ ala ma dị nso na etiti obodo.
1 Nkwari akụ CitizenM Copenhagen Radhuspladsen
2 Igwe na -emepụta Copenhagen
3 Obodo CityHub Copenhagen
4 Hotellọ nkwari akụ
6 Hotel Ottilia nke Brøchner Hotels
Nkwari akụ CitizenM Copenhagen Radhuspladsen
Nhọrọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ ogo na ụlọ oriri na nkwari akụ dị nso na etiti Copenhagen. Dị N’ime obodo, họtel CitizenM Copenhagen Radhuspladsen bụ ebe obibi na-atọ ụtọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ nkasi obi na ọnụahịa dị ọnụ ala. Cheta na Copenhagen abụghị obodo dị ọnụ ala. Agbanyeghị, ọnụego maka họtel a, maka ụlọ nkwari akụ 4 nwere ezigbo ezi uche ma agụnyere nri ụtụtụ. N'aka nke ọzọ, ọnọdụ ya dị mma ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịga nlegharị anya na-enweghị igbu oge dị ukwuu na njem. Hotellọ nkwari akụ ahụ dị naanị 600 mita site na Tivoli Gardens, otu n'ime ogige ntụrụndụ kacha ochie na Europe nke ga-abụ otu n'ime isi ihe ị ga-eme n'obodo ahụ.
O doro anya nke kacha mma CitizenM Copenhagen Radhuspladsen bụ ọmarịcha mma ya ọgbara ọhụrụ nke na-eme ka ndị ọbịa ya nso na nka ndị Denmark. Inggagharị bụ ụzọ dị ezigbo mma iji pụọ na usoro ahụ, mgbe anyị na-eme njem, anyị na-achọkwa ịmụ ihe ọhụụ ma nwee mmekọrịta na ọdịbendị ndị ọzọ. Mgbidi ụlọ nkwari akụ a Ndị na-ese ihe nkiri Denmark kpuchiri ha na eserese na eserese. N'ihi ya, ọnụnọ ndị ọbịa na-aghọ ahụmahụ nke na-enye ha ohere ịmụtakwu banyere ọdịbendị nke Denmark.
Igwe na -emepụta Copenhagen
Ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọnụ ala hotels na Copenhagen na nightlife. Generator Copenhagen bụ ebe obibi zuru oke maka eto eto onye choro ibi n’ulo emere maka ime ihe omume na nkpori. The ndo o nwere nnukwu mmanya abalị N'ime mmemme, karaoke na mmemme DJ na-ahazi, ọ bụ ohere dị mma ịnweta mmanya, zute ndị njem ndị ọzọ ma nwee ọmarịcha egwu. Ọ bụ ebe ọ bụghị naanị ihi ụra, ị nwere ike ịme ọtụtụ ndụ n'ime ụlọ mbikọ.
Agbanyeghị, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịpụ, jee ije ma mara obodo ahụ, ebe obibi a bụkwa nhọrọ dị mma. Ọ dị naanị nkeji asaa site na ọdụ ụgbọ mmiri Kongens Nytorv na ọ dị nso Frederiks Kirke (the Marble Church) na Amalienborg Obí, dị mkpa na nleta gị n’obodo ahụ.
A na-akọrọ ọnụ ụlọ dị ọnụ ala, ihe nwere ike ịbụ nsogbu ma ọ bụrụ na ị naghị arahụ ụra n'ụlọ gọọmenti rụrụ ụdị a. Agbanyeghị, maka ndị chọrọkwu nzuzo, ụlọ mbikọ na-enyekwa ohere ịchekwa ime ụlọ nkeonwe. Uru ọzọ nke Generator Copenhagen bụ na nnabata ahụ na-emeghe awa 24, yabụ na ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla ma ọ bụrụ na ị ga-eme ya ndebanye mbata ma ọ bụ lelee chi abọọ.
Obodo CityHub Copenhagen
Ezigbo nhọrọ maka ndị na-achọ ụlọ nkwari akụ dị ọnụ ala na Copenhagen nwere ezigbo ọrụ ndị ahịa. CityHub Copenhagen bụ ụlọ nkwari akụ nke oge a guzo maka nlebara anya nke onwe ha na-enye ndị ahịa ha. Ọtụtụ ụlọ oriri na ọ hotelsụ Coụ Copenhagen etinyela nkà na ụzụ kwa ụbọchị iji meziwanye ọrụ ha, ụfọdụ na-agbazinye ndị ọbịa mbadamba nkume na ọbụna nye ha ohere ịchịkwa ọkụ n'ime ụlọ site na ụdị ngwaọrụ ndị a.
Agbanyeghị, atụmatụ CityHub Copenhagen ka mma. Site na teknụzụ ha ejirila gbasaa ọrụ ha gafee mgbidi ụlọ nkwari akụ ahụ. Ha ekeela ngwa nke ndị ọbịa nwere ike iwunye na mobiles ha n'efu. Site na ngwa a, ndị ahịa nwere ike ịkparịta ụka ma kpọtụrụ ndị ọrụ ụlọ nkwari akụ. Ọ bụ nnukwu ngwa ọrụ iji rịọ maka ndụmọdụ na aro ka ị na-agagharị n'okporo ámá niile nke obodo ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, ụlọ ndị ahụ nwere sterio nke ị nwere ike jikọọ na Bluetooth, ihe a na-enwe ekele maka ebe ọ bụ na anyị anaghị eburu ndị ọkà okwu na akpa anyị ma ọ bụ ụdị ihe anyị na-echekarị mgbe anyị na-eme njem.
Hotellọ nkwari akụ ahụ nwere njikọ nke ọma na etiti ahụ, Naanị mita 550 dị ka ọdụ ụgbọ mmiri Frederiksberg Allé, n'ihi ya ị gaghị enwe nsogbu ị ga-aga ebe ndị njem nleta kachasị. Agbanyeghị, ọ bụrụ n ’ọ naghị amasị gị ịga njem ọhaneze, cheta na Copenhagen bụ obodo igwe kwụ otu ebe, enwere ike ịgbazite ha ebe ọ bụla! Site na ịpịtụ ntakịrị, site na CityHub Copenhagen ị nwere ike iru ebe ndị nnọchi anya dịka National Museum of Denmark ma ọ bụ Frederiksberg Nwere ubi n'ubi na-erughị nkeji iri.
Nkasi obi niile nke ụlọ na nkwari akụ Copenhagen. Mgbe ụfọdụ, mgbe anyị na-eme njem, anyị adịghị eche dị ka okodu anyị dum ọnụ eri si ụlọ oriri na ọ toụ toụ na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, karịsịa ma ọ bụrụ na anyị achọghị ka na-emefu a otutu ego na anyị na-na a obodo dị ka ọnụ dị ka Copenhagen. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ị nweta nhọrọ nke isi nri gị ma ọ bụ ọ bụrụ n 'ịchọrọ karịa karịa ohere ime ụlọ nkwari akụ ọdịnala, pelọ oriri na ọpeụ Aụ Aperon bụ ezigbo nhọrọ maka gị. N’obere ụlọ ya nke nwere ọmarịcha Danish ị nwere ike ịnụ ụtọ ya nkasi obi niile nke ụlọ, na-enweghị uru nke ụlọ nkwari akụ.
N'ihi ya, ọ nwere kichin nke oge a, ejikere nke ọma na mbara igwe sara mbara ebe ị nwere ike izu ike mgbe ị gachara n'obodo. Ọ bụ nhọrọ na-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na gị na ụmụaka na-eme njem na echiche ịbikọ ọnụ n'otu ọnụ ụlọ anaghị amasị gị nke ukwuu. Ọzọkwa, nhazi nke ụlọ ndị ahụ dị mma. Roomslọ dị iche iche na-arụ ọrụ ma dị mma, ha jupụtara na windo na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ọmarịcha ọkụ.
N'ihe banyere ọnọdụ, pelọ nkwari akụ nke Aperon dị na Indre Site district, nke kacha dị na Copenhagen, yabụ na ị ga-enwe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe niile masịrị gị. Onye ama ama ama Rosenborg dị naanị narị mita asaa, ma ị nwere ike ịga ije na ọdụ Nørreport na erughị nkeji ise.
Wakeup Copenhagen- Bernstorffsgade
Ezigbo ebe obibi maka ndị na-aga Copenhagen na azụmaahịa. Wakeup Copenhagen- Bernstorffsgade dị na obodo, na mpaghara København. Ọnọdụ ya mara mma. Ọ dị ezigbo nso na ebe ndị njem nlegharị anya na-adọrọ mmasị na a mpaghara jupụtara na ndụ. Na gburugburu ụlọ nkwari akụ ahụ, ị ​​ga-ahụ ụlọ mmanya, ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọ endụ endụ na-adịghị agwụ agwụ iri nri, haveụọ ihe ọ eatụ drinkụ ma kpoo ikuku nke isi obodo Denmark.
Agbanyeghị, ihe na-eme ụlọ nkwari akụ a na ndepụta nke ụlọ nkwari akụ 6 kacha mma na Copenhagen na 2020 abụghị naanị ọnọdụ ya. Wakeup Copenhagen- Bernstorffsgade bụ a ezigbo ebe obibi maka ndị na-aga obodo maka azụmahịa. Mpaghara ya ndị gbara gburugburu na windo buru ibu na nnukwu windo ndị na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ya na-akpali akpali echiche nke obodo. Mpaghara ndị a nwere ebe emere maka ọrụ. Ha nwere a etiti bussines, na kọmputa maka iji ya n'efu, na otu na-enye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu enyere ohere ịrụ ọrụ nke ọma.
Ime ụlọ ndị a nwere ọmarịcha imepụta ma ọ bụ ezie na ha adịchaghị oke, mana ha zuru oke. Ha nwere obere tebụl, isi okwu ọzọ ma ọ bụrụ na ịnọghị n'obodo maka oge ezumike. Tụkwasị na nke ahụ, ọ dị nso n'ọdụ ụgbọ mmiri Copenhagen, e nwere ọnụ ụlọ ndị anya ha na-eletụ anya n'oké osimiri. Whonye na-agaghị achọ ịnụ ụtọ ihe ngosi ahụ mgbe ọ na-eteta?
Hotel Ottilia nke Brøchner Hotels
Nzube na echiche 360º nke obodo Copenhagen, ụlọ nkwari akụ kachasị mma maka oge pụrụ iche. N'ikpeazụ, ebe obibi kwesịrị imechi ndepụta a nke ụlọ nkwari akụ 6 kacha mma na Copenhagen na 2020 bụ Hotel Ottilia nke Brøchner Hotels. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ dịghị ọnụ ala ma bụrụ etiti dị ka ndị ọzọ, ọ bụ ebe nwere ọtụtụ amara, adabara oge pụrụ iche.
Ọmarịcha, ụlọ nkwari akụ ahụ dị ebube. A na-ewu ya na ihe, ruo ihe karịrị afọ 160, ebe biya biya kachasị ama na Denmark, ndị Carlsberg. Factorylọ ọrụ ụlọ ọrụ ochie na-agwakọta nke ọma na ihe ndị mara mma ọgbara ọhụrụ. Edebere nkọwa niile nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọbụna na facade, na-asọpụrụ ọta ọla edo 64 ndị siri na mgbidi pụta mgbe ebe omume biya na-eguzo, ha tinye windo okirikiri.
Thelọ nkwari akụ ahụ na-enye ọtụtụ ọrụ n'ime akụrụngwa ya: ọrụ mgbazinye igwe, spa, mgbatị ahụ, ọbụlagodi mmanya na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ. Na mgbakwunye, kwa ụbọchị, ụlọ nkwari akụ na-ahazi a obi ụtọ oge nke mmanya dị n’efu maka ndị ọbịa ya niile, ihe omume dị mma iji nwee ntụrụndụ ma zuru ike mgbe ogologo ụbọchị nke nlegharị anya.
Obi abụọ adịghị ya, ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ kacha mma n'ụlọ nkwari akụ. Dabere n’elu ala ụlọ ahụ nwere otu n'ime echiche ndị kachasị adọrọ mmasị na Copenhagen. Yabụ, site na tebụl ha, ị ga-atọ ụtọ nri Italiantali na-atọ ụtọ, ebe ị na-ekpori ndụ 360 a maka isi obodo Denmark.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » 6lọ nkwari akụ XNUMX kacha mma na Copenhagen